Xaalada Deg Ceelwaaq ee Gobolka Gedo ayaa degen ka dib dagaal shalay halkaasi ka dhacay – SBC
Xaalada Deg Ceelwaaq ee Gobolka Gedo ayaa degen ka dib dagaal shalay halkaasi ka dhacay
Posted by editor on September 12, 2011 Comments
Xaalad degenaansho oo aan caga buuran ku taagneyn ayaa laga dareemayaa Degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo halkaas oo uu maalin nimadii shalay ka dhacay dagaal xoogan oo dhexmaray ciidamada Dowlada KMG ah ee Soomaaliya iyo kuwa Xarakada mujaahidiinta Alshabaab.
Dagaalkii shalay ka dhacay Ceelwaaq ayaa ahaa mid saameyn buuxda ku yeeshay dadka iyo deegaanka, waxaana saaka laga dareemayaa degenaansho aan buurneyn iyadoo halkaaasi ay weli ka taagantahay xiisada labadii dhinac ee shalay ku dagaalamay.
Ka dib saacado ay ku sugnaayeen xoogaga xarakada Alshabaab gudaha Ceelwaaq ayaa hadana waxaa laga warhelay iyagoo mar qura halkasi isaga baxay ayna weydaarteen ciidamada Dowlada KMG ah oo iyagu horay halkaasi loogaga saaray.
Dagaaladaasi ayaa ahaa mid aad u xulus iyadoona uu sabab u noqday geerida dad kor u dhaafaya 25 qof oo sida la rumeysanyahay u badan dhinacyadii dagaalamay iyo dhaawac intaasi ka badan, waxaase dadkii dhintay ka mid ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada DKMG ah .
Saraakiil ka tirsan ciidamada DKMG ah oo la hadlay saxaafada ayaa sheegay in magaalada Ceelwaaq ay markii hore ugaga bexeen xeelad dagaal balse iminka ay ku soo laabteen diyaarna u yihiin dagaalo ay la galaan dhinacyada xarakada Alshabaab.
Sikastaba ha ahaatee xaalada ayaa ah mid degen balse waxaa la dareemayaa xiisad dagaal iyo isku hub urursi oo ay labada dhinac waa dwlada KMG ah iyo Xarakada Alshabaab ay ka wadaan gudaha gobolka,iyadoona dadka deegaanka ay ka muujiyeen cabsi xoogan qaarkoodna ay durba bilaabeenba in ay qaxaan.
SBC International Baardheere.